दाइँ गर्न गोरु नै चाहिन्छ है !
माघ १, २०६८ | दीनानाथ श्रेष्ठ
अयोग्य शिक्षकहरूको भीडलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सामुदायिक विद्यालयको पतनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । सरकारले समयमै बुझनुपर्छ, “मृगहरूको वथानले बाघको सिकार गर्न सक्दैन ।” अझ् भनौँ, “दाइँ गर्न गोरु नै चाहिन्छ, बोकाले हुँदैन ।”
सामुदायिक विद्यालय तीन ओटा खम्बामा अडिएको हुन्छः शिक्षक, समुदाय र सरकार । यी तीनै पक्षको सहकार्य, समन्वय र अन्तरसम्बन्धले सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँका विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्द छ । एस.एल.सी.को रिजल्टले बर्सेनि देखाउने गरेको छ– निजी विद्यालयका विद्यार्थी ९० प्रतिशत भन्दा बढी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी ४० प्रतिशत भन्दा कम उत्तीर्ण हुने गर्छन् । हुनेखानेले निजी विद्यालयमा र हुँदा खानेले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्ति परम्पराको रूपमा विकास भएको छ । दिन प्रतिदिन सामुदायिक विद्यालय थाङ्ने–माङ्नेहरूको विद्यालयको रूपमा परिणत हुने क्रम डरलाग्दो रूपमा विकसित हुँदै गएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनको
स्तर कमजोर हुनाका केही कारण
अयोग्य शिक्षकको भीड
अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने अभिभावकको चाहनामा तीव्र वृद्घि हुँदै गएको छ । आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउनुको प्रमुख कारण अङ्ग्रेजी माध्यम हो । सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्ने व्यवस्था गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण त्यहाँका अयोग्य शिक्षक हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा खास गरी प्राथमिक तहका अधिकांश शिक्षकले अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्ने त परको कुरा ; आफ्नै नाम समेत अङ्ग्रेजीमा लेख्न सक्दैनन् । अयोग्य शिक्षकहरूको भीडलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सामुदायिक विद्यालयको पतनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । सरकारले समयमै बुझनुपर्छ, “मृगहरूको वथानले बाघको सिकार गर्न सक्दैन ।” अझ् भनौँ, “दाइँ गर्न गोरु नै चाहिन्छ, बोकाले हुँदैन ।”
धेरैजसो शिक्षक जागिर खान शिक्षक भएका हुन्, पढाउन होइन । उनीहरूको ध्यान कतिबेला ४ बज्छ र कहिले के निहुँमा बिदा होला भन्ने मात्र हुन्छ । शिक्षकको लापरबाहीले विद्यार्थीको भविष्य मात्र होइन देशकै भविष्य एक पुस्ता पछाडि धकेलिन्छ भन्ने चेतना शिक्षकमा नभएसम्म सामुदायिक विद्यालयको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्दैन ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यालय नै जाँदैनन्, गए पनि कक्षामा जाँदैनन्, कक्षामा गए पनि पढाउँदैनन्, पढाए पनि मन लगाएर पढाउँदैनन् ।
जब शिक्षकमा अनुशासन हुँदैन, विद्यार्थीमा अनुशासन हुँदैन । जब विद्यार्थीमा अनुशासन हुँदैन, समाज मा अनुशासन हुँदैन । जब समाज मा अनुशासन हुँदैन, देशमा अनुशासन हुँदैन ।
शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्नु
धेरै शिक्षक यस्ता छन् जसको अधिकांश समय विद्यालयमा होइन, पार्टी कार्यालयमा बित्छ । जसको झेलामा विद्यालयमा अध्यापन गराउन आवश्यक पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री होइन, दलका घोषणापत्र तथा दस्तावेजहरू हुन्छन् । सबै राजनीतिक दलको लागि शिक्षक भोट छाप्ने मेशिन भएको छ । राजनीतिक दलले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने भनेको एक हिसाबले शिक्षक परिचालन गर्ने हो ।
लट्ठी टेक्ने उमेरसम्म जागिर खाने प्रवृत्ति
शिक्षकले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ६० वर्ष हो । शिक्षा प्राविधिक विषय हो । यो पेशाको लागि जुझरु, सृजनशील, लगनशील र आफ्नो कार्यक्षमता निरन्तर अद्यावधिक गर्न सक्ने युवा पुस्ता आवश्यक छ, जोतिन नसक्ने बुढो गोरु होइन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने हो भने ३० वर्ष नाघेकालाई शिक्षकमा नियुक्त गर्नु हुँदैन र ५० वर्ष नाघेकालाई अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
शिक्षकलाई राजनीतिक दलको आश्रय
शिक्षकलाई ‘जागिर’मा कुनै समस्या परेमा ऊ जाने ठाउँ शिक्षा कार्यालय होइन, पार्टी कार्यालय हो । पुरस्कार , सरुवा, बढुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा शिक्षा विभाग वा शिक्षा मन्त्रालयले होइन, पार्टीले गर्छ । अनि शिक्षक कोहीप्रति उत्तरदायी किन बन्नु परयो जब राजनीतिक दल नै शिक्षकका लागि ‘त्वमेव माताश्च, पिता त्वमेव’ हुन्छ भने । यहाँसम्म कि एस.एल.सी.को सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्न मात्र होइन, जनगणनाको लागिगणक नियुक्त गर्न समेत पार्टीहरूले भागबण्डाको आधारमा गर्छन् ।
अधिकारविहीन प्रअ र जिशिअ
प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रमुख हो भने जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्लाभरिका शिक्षक र विद्यालयहरूको प्रमुख । प्रमुखलाई पुरस्कार दिने र दण्ड दिने अधिकार हुनुपर्छ । तर हालको व्यवस्था अनुसार प्रधानाध्यापकको अधिकार भनेको शिक्षकलाई तलब खुवाउने चेक र तलबी भर्पाइमा सही गर्ने र बढिमा हाजिरकापीमा अनुपस्थित शिक्षकको बिदा लेख्ने हो । जिल्ला शिक्षा अधिकारी को अधिकार भनेको राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनले गरिदिएको निर्णयमा सही गर्नु हो । शिक्षकले जतिसुकै बद्मासीगरोस्, जिल्ला शिक्षा अधिकारी ले अरू त अरू त्यस्ता शिक्षकलाई एक कि.मी. परको अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने हैसियत समेत राख्दैनन् । बरु एउटा प्राथमिक तहको शिक्षकले जिल्ला शिक्षा अधिकारी लाई नै सरुवा गरिदिने धम्की दिने ‘हैसियत’ राख्दछन् ।
पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था नहुनु
शिक्षक विद्यालय गए पनि हुन्छ, न गए पनि हुन्छ । कक्षा कोठामा गए पनि हुन्छ, न गए पनि हुन्छ । पढाए पनि हुन्छ, नपढाए पनि हुन्छ । न शिक्षकले साह्रै लापरबाही गर्दागाली गर्ने कोही छ, न साह्रै मिहिनेत गर्दा स्याबासी दिने कोही छ । पुरस्कार को व्यवस्था छैन भनौँ, प्रत्येक वर्ष शिक्षा पुरस्कार बाँडिन्छ, बढुवाको व्यवस्था पनि छ । तर त्यो व्यवस्था इमान दार र मिहिनेती शिक्षकको लागि होइन, दलका कार्यकर्ता र शिक्षक संघ–सङ्गठनका नेताको लागि हो ।
वेतन दिने सरकार, बुझाउने निजी विद्यालयलाई
सरकारले दिएको तलब अधिकांश सरकारी कर्मचारीले निजी विद्यालयमा बुझउँछन् । सरकारी कर्मचारीले त गरे – गरे , सरकारी शिक्षकले समेत सामुदायिक विद्यालयमा बुझेको तलब निजी विद्यालयमा बुझउँछन् । अनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक कोप्रति जिम्मेवार रहन आवश्यक रह्यो र ? सरकारी लाभको पदमा बस्ने हरेक व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा मात्र पनि सामुदायिक विद्यालयको आमूल परिवर्तन सम्भव छ ।
सरकार र अभिभावकको अनुगमन नहुनु
सरकार चलाउनेका छोराछोरी, जागिरेका छोराछोरी, कर्मचारीका छोराछोरी, नेताका छोराछोरी, व्यापारीका छोराछोरी, शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । कतै केही हैसियत नभएकाका छोराछोरी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । त्यसता अभिभावकहरूले विद्यालय र शिक्षकले जतिसुकै लापरबाही गरे पनि विद्यालय वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गुनासो गर्ने हैसियत राख्दैनन्, गुनासो गरे पनि तिनका गुनासोले केही अर्थ राख्दैन ।
गुणस्तर हीन पाठ्यपुस्तक
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको छ । पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएको कागजको गुणस्तर त यस्तै त्यस्तै हो, पाठ्यवस्तु समेत निजी विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तकको तुलनामा न गुणस्तरीय छ न आकर्षक नै । खास गरी साना विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक रङ्गीन चित्रले भरिएको र पाठ्यवस्तु आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गरिनु आवश्यक छ जसले साना विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नु का साथै पढाइमा रुचि ज गाउँछ । तर सामुदायिक विद्यालयमा साना विद्यार्थीले प्रयोग गरिने पाठ्यपुस्तक वास्तवमै ‘दानमा प्राप्त गरेको थारोगाई’ जस्तो छ ।
सक्षम व्यक्ति शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित नहुनु
शिक्षण पेशालाई अन्यत्र नपाएपछि जागिर खाने ठाउँको रूपमा बुझन्छि । वास्तवमा शिक्षण पेशामा सबैभन्दा दक्ष व्यक्तिहरू हुनुपर्ने हो । भनिन्छ, “एक अयोग्य शिक्षकले एउटा पुस्तालाई नै पछाडि धकेल्छ ।” यस्तो संवेदनशील पक्षमा दक्ष जनशक्ति आकर्षण गर्न सरकारको ध्यान पटक्कै गएको देखिँदैन बरु सामुदायिक विद्यालयलाई अस्थायी शिक्षक भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका बुँदाहरूमध्ये आधाभन्दा बढी बुँदाहरूमा शिक्षकको कमजोरी देखिन्छ तर यसमा शिक्षक मात्र दोषी भन्न पटक्कै सकिँदैन । शिक्षक पनि एक सामाजिक प्राणी हो । जबसम्म कर्तव्यच्यूतलाई सजाय र इमान दारलाई पुरस्कार को संस्थागत रूपमा विकास गर्न सकिँदैन यसको वा उसको दोष भनेर कुनै पनि पक्ष पन्छिएर पानी माथि ओभानो बन्न खोज्नु देशलाई अझ् एक पुस्ता पछाडि धकेल्नु र बर्बाद बनाउनु हो । एउटा प्रचलित, सान्दर्भिक, मार्मिक भनाइ छ, “एक वर्षको लागि धान रोप, दश वर्षको लागिरूख रोप, सय वर्षको लागि शिक्षामा लगानीगर ।”
शिक्षक, समुदाय र सरकारलाई चेतना भया ।
वाल्मीकि निमावि, बागेश्वरी–८, भक्तपुर